Hupenyu hunova hwakanaka paunodzidza kuva wakanaka kwauri iwe sezvauri kune vamwe. - Anotungamira - Quotes Pedia
Kuzvida chinhu chakakosha asi isu kazhinji tinozvirega zviri mukati mekuchengetedza hukama hwakasiyana muhupenyu. Iwe unonzwa kuti kuchengetedza hukama ihwohwo hwakakosha nekuti ivo ndivo vaunodawo uye vanochengeta zvakanyanya.
Asi iwe unofanirwa kunzwisisa kuti iwe unofanirwa kuzvitarisira pachako zvakanyanya sekuchengeta kwako vamwe. Tora nguva yekushandisa wega. Bata neizvo iwe zvaunonyatsoda uye batana nazvo. Zvipe nzvimbo kuti ukure uye uzvizive pachako.
Chete kana iwe uchizvida iwe pachako, iwe unenge uchikwanisa kuda vamwe zvakakwana. Hazvireve kuti isu tinongozvikoshesa isu pachedu. Zvinoreva kuti isu tinobatanidza isu pachedu mune yekutanga runyorwa zvakare. Zvinganzwika sezvakanaka asi isu kazhinji tinokanganwa kuisa zvido zvedu pachedu mukushongedzwa kwehupenyu.
Hupenyu huchave hwakanaka kana iwe uchinyatsofara. Iwe uchawana nzvimbo yako inofadza. Iwe unogona zvakare kuziva nezvekuda kwausina kumboziva nezvako. Kuzvida pachako kunoreva kusvika pakubata neako pachako.
Kana iwe ukazviwana iwe pachako uye zvakanyanya, iwe unotanga kuzvida iwe zvakanyanya. Izvi zvinokuita kuti ufare uye wave kugadzirira kuparadzira mufaro kune vamwe zvakare.
Naizvozvo, zvakakosha kuti usazvikanganwa iwe pachako mukuda kuva munhu akanaka mumaziso evamwe kana mukutarisira avo vanoda. Zvirere pachako pazvinhu zvakakosha uye vamwe zvakare uye kukura pamwe chete kuti urarame hupenyu hwakanaka.
Akanaka Kufambisa Quotes
Hupenyu Hwakanaka Quotes
Mirayiridzo Yakanaka Pane Hupenyu
Yakanaka Positive Quotes
Akanaka Quotes Nemifananidzo
Chidzidzo Yakadzidza Quotes PaHupenyu
Usaregeredza zvaunogona. - Asingazivikanwe
Usaregeredza zvaunogona. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana:
Mwari anonzwisisa minamato yedu kunyangwe isu tisingakwanise kuwana mazwi ekutaura. - Asingazivikanwe
Mwari anogara achikuteerera. Saka, pese patinenge tichisangana nenguva yakaipa, hatifanire ...
Tariro yezvakanakisisa, gadzirira zvakashata, uye tora chero chinouya nenzira yako. - Asingazivikanwe
Iwe unofanirwa kugara uchitarisira kune zvakanakisa, kunyangwe zvipingamupinyi zvinouya munzira yako. Hupenyu hau…
Kukosha kwako hakudzikire zvichienderana nekutadza kwemumwe munhu kuona kukosha kwako. - Asingazivikanwe
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti hakuna munhu anogona kutongwa chete pahwaro hwedzimwe nzira dzekujairira…